Hita ao Espaina izao ny satan'ny WhatsApp | Vaovao momba ny gadget
Efa misy any WhatsApp ny satan'ny WhatsApp
Androany maraina dia niresaka momba ilay fiasa vaovao nokasain'ny fampiharana fandefasan-kafatra WhatsApp hamoaka ao anatin'ny ora manaraka ary raha ny any Espana dia efa misy io. Ny fampiatoana an'io asa vaovao misy an'ny mpampiasa io dia lavitra, ka amin'ny fotony dia tsy ilaina ny manavao ny rindranasa (raha manana ny kinova farany napetraka ianao) dia ho hitanao ny fomba fampiharana ny fanjakana. Raha te hahafantatra bebe kokoa momba an'io fiasa io ianao avelanay eto ny lahatsoratra amin'ity maraina ity izay miresaka betsaka kokoa momba ny fiasany.
Ny fampahavitrihana araka ny efa nolazainay tany am-piandohana dia lavitra ary noho izany ny mpampiasa dia tsy mila manao na inona na inona, fa raha toa ka tsy mety aminao na tsy miasa ianao dia tsara kokoa ny mamerina ilay rindranasan-kafatra ary koa hiseho ho azy ireo status. Ity safidy ity dia miseho eo amin'ny toeran'ny fifandraisana «ankafiziny» amin'ny iOS sy Android.
Raha ny tokony ho izy dia tsy ilaina ny manazava indray hoe inona no misy an'io asa io, fa ambonin'izany rehetra izany dia afaka milaza isika fa safidy ahafahantsika mamorona horonantsary na sary kely ary hamoaka izany any amin'ny fanjakantsika, amin'ity fomba ity ireo olona ananantsika voafidy izay afaka mahita ny fanjakantsika, azon'izy ireo atao ny mijery azy mandritra ny 24 ora. Aorian'ity indray mitoraka ity dia hanjavona amin'ny fanjakantsika ny horonantsary na sary, eny, mitovy amin'ny Tantara Facebook, Tantara Instagram ary Snapchat.
Azo antoka fa mpampiasa maro no tsy hampiasa ity WhatsApp vaovao ity, fa maro ny hafa, ary lasa zavatra ampiharina amin'ny ankamaroan'ny tambajotra sosialy sy ny fampiharana fandefasan-kafatra izany. Efa nanandrana ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Software » Efa misy any WhatsApp ny satan'ny WhatsApp
Ity no atin'ny Nintendo Switch tao anatin'ny fotoana fohy nipoaka
Nanivana sary vitsivitsy hafa an'ny Samsung Galaxy S8